इजि मोन्टाना, DJ अराफात को डोप्लेन्गर मानीएको मान्छे अराफात मा एक भयानक खुलासा गर्दछ - teles रिले
इजी मोन्टाना, मानिस DJ अराफातको डबल मानिन्छ, अराफातको बारेमा भयानक खुलासा गर्दछ
By bryanekobe On जुल 28, 2020
इजी मोन्टाना, मानिस डीजे अराफातको डबल मानिने मान्छेले कलाकारसँगको समानताका कारण योरोबोको मृत्यु १ बर्षको उत्सवको केहि दिन अघि मात्र एउटा उत्साहजनक खुलासा गरेको छ।
दाउसीको जीवनकालमा, त्यहाँ धेरै प्रशंसकहरू थिए जसले आफ्नो पोशाक र व्यवहारको शैली अपनाएर सबै जस्तो गरे। यद्यपि, त्यहाँ विशेष रूपले एक थियो जसले आफ्नो डबललाई ठोकर्यो। यसको नाम इजी मोन्टाना हो। योरोबोको समानता प्रभावशाली छ।
यस अवस्थाले उहाँलाई मन पराउने भन्दा राम्रो इजी मोन्टानालाई पट्याएन। त्यसपछि उसले कलाकारबाट आफूलाई छुट्याउनको लागि आफ्नो शरीर र शैली परिवर्तन गर्न खोज्यो। तर केहि पनि सहयोग गरेन।
टोनी पार्कर र एक्सेल फ्रान्सिन: लामो कथाको अन्त्य ...
मेघन मार्कल: बेलायती शाही परिवार पक्कै मोडिदै छ ...
केट मिडलटन र विलियम प्रशंसकहरूलाई धन्यवाद दिन्छन्!
"यती धेरै कुराले मलाई रिस उठ्यो कि म सधैं भनिएको थिएँ कि म अराफातको डबल हुँ, म आकार लिन जिममा गएँ, मैले मेरो कपाललाई चिन्ता बढाउन दिएँ र मैले एउटा गरें। मेरो नाकमा छेड्ने तर त्यसमा केही परिवर्तन भएन ", उनले यो मंगलबार, जुलाई २,, २०२० लाई ला of को Peopl'Emik कार्यक्रमको दौरान गवाही दिए।
यद्यपि, सबैभन्दा अचम्मको कुरा बाँकी छ। वास्तवमा, इजी मोन्टानाका अनुसार, अराफात डीजेको आकस्मिक मृत्युको दिन अगस्त १२ मा उनी घानामा थिए। उनले कमाण्डर जाब्रासँग फर्कने क्रममा एउटा विशेषता गर्ने योजना गरेका थिए। र भाग्यको चिह्नको रूपमा, नाटकको दिनमा, उसले आफ्नो सपनामा आफुलाई नाच पार्टीको लागि अरफात डीजेसँग भेट्टायो।
“जब म ब्यूँझिएँ, म शौचालयमा आराम गर्न गएँ। तर जब म मेरो होटेलको कोठामा फर्कें, तब डेशिको दृढ उपस्थिति महसुस गरें। मलाई थाहा छैन यो कहिले तपाईलाई भएको छ कि छैन तर मैले साच्चै उसको उपस्थिति महसुस गरें। मैले आफैंलाई भनें, जब म अबिजानमा छु हामी वास्तवमै यो फिचर गर्ने छौं।
र जब म उठ्छु म मेरो फोन लिन्छु र जताततै अराफातको स्थिति देख्छु र पढ्छु अरफात माफ गर्नुहोस् हामीलाई त्यो नगर। म विश्वास गर्दिन। यो त्यहि हो जहाँ मलाई थाहा थियो कि ऊ वास्तवमै मलाई भेट्न आयोउहाँले भन्नुभयो।
डीजे अराफातको मृत्युको पहिलो वार्षिकोत्सवको स्मरणको केही दिन अघि यस कुराको प्रकाश आएको हो र वेबमा पहिले नै धेरै प्रतिक्रियाहरू निम्त्याइरहेको छ।
यो लेख पहिलो पटक देखा पर्‍यो: https://afriqueshowbiz.com/easy-montana-fait-une-terphan-revelation-arafat-ma-visite-au-ghana-le-jour-de-sa-mort/
इजी मोन्टानाDJ अराफात lookalike को रूपमा देखा मान्छे Arafat को बारे मा भयानक खुलासा गर्दछ
bryanekobe 996 पोस्ट0टिप्पणी
xnxx: friend सरल सल्लाह हाम्रो मित्रतालाई अन्तिम बनाउन
नालिवुड अभिनेत्रीकी साथी एन्जेला ओकोरीले उनको रहस्यमय मंगेतरको बारेमा सबै कुरा बताइन्।
टोनी पार्कर र एक्सेल फ्रान्सिन: लामो प्रेम कथाको अन्त्य! !
मेघन मार्कल: बेलायती शाही परिवारले पक्कै पनि यसको पृष्ठ बदल्दै छ ...